Archive du 20161115
Aza mifanambaka e !
Sambasamba aho ry Jean mba hitafatafa aminareo anio. Saika nipoaka mantsy ny atidohako nieritreritra sy nandinika ity fombanareo toa mitory fisaraham-bazana ity.
Bekonazy-Bemanonga Nokianin�ny fokonolona ny fomba fiasan�ny ONG Fanamby
Vaky ambatolampy teo anatrehan�ny mpamatsy vola ny faran�ny herinandro teo ny lesoka amin�ny fomba fiasan�ny ONG Fanamby any amin�ny kaominina ambanivohitra Bemanonga, Faritra Menabe, misy ny � All�e de Baobab �.
Taksibe Ivato nifoaka Taksi Olona maromaro no naratra mafy tetsy 67 ha
Nandratra olona indray ny fiara sprinter. Taksibe iray ao amin�ny zotra D mampitohy an�Ivato sy Vassacos no nifaoka fiarakaretsaka roa samy nijanona teo amoron-dalana ka nihorirana saika nivadika ambony ambany, omaly folakandro tokony ho tamin�ny 1 ora tetsy 67 ha.